Sina azo ampiasaina PEVA Rain Ponchos miaraka amina mpanamboatra pirinty logo manokana | mandrakizay
Akanjo sy orana PVC
PE Raincoat sy Poncho
EVA Raincoat sy Poncho
Akanjo Raindrano PEVA sy Poncho
Akanjo mitafy TPU
Ponco orana mahafatifaty ivelany ho an'ny ankizy USD1.1-USD1.8
Akanjo an-jaza miaraka amin'ny Hood USD1.1-USD2.3
Ponto orana vonjy maika PE azo USD0.12-USD0.3
Azo ampiasaina PEVA Rain Ponchos miaraka amin'ny pirinty Logo Custom
Ataovy miavaka ny Cover TPU Rain Cover ho an'ny kitapo
Size: haben'ny olon-dehibe mahazatra
Kitapo antsipiriany: 1pc / kitapo, 250pcs / baoritra, refesina: 49.5x39.5x29.5cm
Fotoana famokarana: Tokony ho 30 andro
Fe-potoana fandoavam-bola: T / T, L / C, Western Union
Momba ny santionany:
1. Fotoana santionany: Araka ny volavolanao. Fotoana santionany: 5-7 andro
2. Fiampangana santionany: Maimaimpoana amin'ny santionany efa misy. Fotoana santionany: 1 andro
1. MOQ ambany: afaka mifanena tsara amin'ny orinasa fampiroboroboana izany.
2. OEM ekena: Afaka mamokatra ny volavolanao izahay.
3. Serivisy tsara: Raisinay ho namana ny mpanjifa.
4. Kalitao tsara: Manana rafitra fanaraha-maso kalitao hentitra izahay. Laza tsara eny an-tsena
1bag / tapa
Lanja isaky ny Unit: Approx.68g
Haben'ny boaty: 42 * 32 * 28cm
Unit per Carton: 200piasa
Fotoana fitarihana: Tokony ho 30 andro aorian'ny nahazoana ny petra-bola
Fandoavana sy fandefasana: Fomba fandoavam-bola: T / T, Western Union, Paypal, L / C
Andininy fanaterana: Ao anatin'ny 30-50days aorian'ny fanamafisana ny baiko
Previous: Ataovy miavaka ny Cover TPU Rain Cover ho an'ny kitapo
Manaraka: Akanjo palitao EVA sariaka amin'ny tontolo iainana
1.Q: Aiza ny orinasa misy anao? Afaka mitsidika eto ve aho?
A: Ny orinasa misy anay dia miorina ao amin'ny Shijiazhuang City, faritanin'i Hebei, Sina. Tongasoa eto hitsidika anay.
2.Q: Inona ny MOQ?
A: Ny MOQ anay dia 2000pcs / loko. Raha misy loko misy dia ekena ihany koa ny MOQ kely.
3.Q: Azoko atao ve ny manontany santionany iray alohan'ny hanafarana ny toerana?
A: Eny, afaka mandefa anao santionany izahay maimaim-poana, fa ny mpanjifa kosa dia mila mandoa vola mazava tsara amin'ny santionany, toy ny DHL, TNT, FEDEX, UPS sns.
4.Q: Azonao atao ve ny manaova sary miavaka?
A: Eny, afaka manao sary namboarina izahay ary manaraka ny kanto.
5.Q: Ahoana ny amin'ny vidiny?
A: Efa 15 taona teo ho eo izahay no namokatra sy nanondrana palitao; Manana expenrience be dia be izahay ary mifaninana ny vidiny. Ny elanelam-bidin'ny vidiny dia manomboka amin'ny 0.12usd ka hatramin'ny 15usd / sombin-javatra arakaraka ny fitaovana sy ny endrika samihafa.
6.Q: Inona ny fandoavanao? Ahoana no fomba andoavanay anao?
A: Azontsika atao ny mandray T / T, L / C, Western Union, escrow fandoavam-bola, raha toa ka manana fepetra takiana amin'ny fandoavam-bola hafa ianao, azafady mamela hafatra ho an'ny fifandraisana aminay.
7.Q: Ahoana ny amin'ny loko?
A: Ny loko mahazatra an'ireo vokatra azo safidiana dia mena, mavo, manga, mavokely ary mangarahara… ny loko Pantone dia azo fidina raha toa ka mahatratra MOQ ny habetsahany.
Fanavaozana, fiasa ary fanatanterahana ny filan'ny mpanjifa.
Adiresy:Unit 904-905, Runxing Building, No.355 South Youyi Street, Shijiazhuang, Sina
Ankizy Pu Raincoat, Pvc Raincoat, Pvc Poncho, Vehivavy palitao orana, Akanjo Peva, Pu Raincoat,